Sida loo helo shaqo aan ka yarayn maalmaha 30 - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » QODOBO • Cameroon - Job Offers • Shaqo bixinta »Sida loo helo shaqo ka yar maalmaha 30
FacebookFacebook9 TwitterTwitter0 Google plusGoogle plus2
Helitaanka shaqo hadda waa mid dhibaato ah oo aan marar badan dooneyno in aan wajahno. Xaqiiqdii, si ka duwan tobannaanyadii dhowaa, shaqo heliddu maaha mid ku tiirsan awoodda ay ku iibin karto nafteeda ama shahaadada midkood. Si kastaba ha ahaatee, ma aha wax aan macquul ahayn; haddii aad rabto inaad ogaato wax walba oo ku saabsan sida ugu dhaqsaha badan ee shaqo u hesho, raac talooyinkan.
Talo # 1: U sheeg shaqada aad rabto
Si ka duwan sida dad badani u maleynayaan, maahan in la kordhiyo tirada codsiyada loo diro inaad kordhiso fursadahaaga shaqo helida. Inkastoo ay cadahay inaanan diirada saarin hal xulasho, had iyo jeer way wanaagsan tahay in la ogaado nooca shaqada aad rabto oo aad si gooni ah u codsato shaqada noocan ah. Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad sharaxdo xirfadaha gaarka ah ee aad haysato degaan gaar ah oo aad ujeeda.
Tilmaamaha # 2: Hababka kala duwan ee raadinta
Halkii laga tashan lahaa bixinnada ugu fudud ee la heli karo, sida kuwa laga helo joornaalada ama bogagga internetka ee ugu caansan, iskuday in aad kala duwo habka aad u heli lahayd fursadaha shaqada.
Trick-ka oo si fiican u shaqeeya waa inuu isticmaalaa shabakaddiisa bulshada. U hubso inaad dadka u sheegto inaad shaqo raadinayso, laakiin badankeeda, in aad ka weyn tahay karti u leh shaqada aad rabto. Digniintu waxay isku daydaa inay bartilmaameedsato dadka ku hareereysan oo leh xiriir bulsho oo xiiso leh; haddii xubnaha qoyskaaga badanaa rabaan inay kaa caawiyaan kharashyada oo dhan, kuwani ma aha had iyo jeer dadka ugu habboon.
Suurtagalnimada kale waa in la doorto codsiyada isdaba jooga ah; Haddii aad ogtahay meesha aad rabto in aad shaqeyso, waxaa haboon in aad dalbato xitaa haddii aadan ka jawaabin dalab shaqo. Dhiirigelinta iyo dantaada ayaa si deg-deg ah u dhigi karta isbeddelka waxayna qancin karaan loo-shaqeeyaha suurtogalka ah Loo-shaqeeyayaasha badankoodu ma soo bandhigaan shaqadooda xitaa haddii ay raadinayaan shaqaale cusub.
Mawduuca # 3: Tababar Shaqo Qoraal ah
Mid ka mid ah damaanada shaqada ee ugu fiican waa Curriculum Vitae. Xaqiiqdii, waa hantidaada aad ku iibineyso, waxayna muhiim u tahay go'aanka lagaa dhigayo inaad tagto marxaladda xulashada xiga ama haddii kale. Sidaas daraadeed waa lagugula talinayaa in aad wax yar qaadato markaad qorto CV-gaaga oo aad si fiican ugu adegto jihada aad rabto. Dib u dir dirista yaryar, laakiin soo dir boostadaada wanaagsan, sababtoo ah waa mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee lagu helo si dhakhso ah u raadsato shaqo ku habboon adiga iyo shaqadaada.
Talo # 4: Khaanadda warqadda daboolka
Waraaqda daboolka waa inaan la iska indha tirin markaad rabto hel shaqo. Waa fursadaada kaliya ee aad u muujinayso shaqo-bixiyahaaga mustaqbalka sida hal-abuurnimada, firfircoonida, dhiirigelinta iyo dabacsanaanta aad tahay. Sida dib u bilaabashada dhowr daqiiqadood oo dheeraad ah si aad u qorto waxay kuu badbaadin doontaa waqti badan ka dib.
Talo # 5: Waad ku fariisin kartaa telefoonka ama naftaada
Ugu dambeyntii, hal cambe oo ugu dambeysa oo bixiya waa inuu isku dayaa inuu talaabo qaado. Halkii aad u dulqaadan lahayd jawaabta, ku dhiirigeli taleefankaaga ama ka sii wanaagsan, u tag goobtaada shaqo ee mustaqbalka si aad u hubiso in codsigaagii la helay isla markaana uu ku raaxeysto, isla mar ahaantiis, inuu ku soo bandhigo nalka ugu wanaagsan oo sidaas tusa loo-shaqeeyahaaga mustaqbalka inaad tahay qofka uu u baahan yahay
Tan la wadaag saaxiibadaada tani waxay caawinaysaa qof
U BAAHAN YIHIIN CUSUB IYO QOYSASKA SCIIDE